मेरी आमा परियार भएकोले बुबाले गाउँ नै छो’ड्नु पर्यो !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/मेरी आमा परियार भएकोले बुबाले गाउँ नै छो’ड्नु पर्यो !!
काठमाडौ। गायक यश कुमारले अहिले जाजरकोटमा जातीय वि’वेदका कारण भएको दुर्घ’टनाको विषयमा केन्द्रित हुँदै अहिले समाजमा जात नै ठूलो पर्खाल बनेको निष्कर्ष दिएका छन् ।यश कुमार आफूले समेत जातीय वि’वेधका कारण संघर्ष गर्नुपरेको बताएका छन् ।
अन्तरजातीय विवाह गरेका यश कुमारले आफ्नो संघर्ष बुबाको विवाह पश्चात सुरु भएको बताउछन । “मेरो बुबा ब्राहमण अर्थात् नेपाल थरका हुन् भने आमा परियार अर्थात् द’लित समुदायबाट र वहाँहरुको विवाहबाट सुरु भयो अन्तरजातीय संघर्षको कथा ।